Press Zim to prosecute killer soldiers: HRW tells Ramaphosa - NewZimbabwe.com Press Zim to prosecute killer soldiers: HRW tells Ramaphosa - NewZimbabwe.com
Some 1000 people including children were arrested following the January violence that left 17 people dead
Press Zim to prosecute killer soldiers: HRW tells Ramaphosa
SOUTH African President Cyril Ramaphosa and other regional leader must force their Zimbabwean counterpart President Emmerson Mnangagwa to allow for the prosecution of soldiers responsible for the killing of civilians in January, a rights watchdog has said.
In a statement this week as Ramaphosa visited Zimbabwe to find ways of helping his country’s northern neighbour deal with a debilitating economic crisis, Human Rights Watch said it had irrefutable evidence the army had deliberately killed protestors.
Human Rights Watch also released a video documenting the excessive and disproportionate force Zimbabwe security forces used to crush nationwide protests from January 14 to 16 and in their aftermath. The protests had been organized by labour federation the Zimbabwe Congress of Trade Unions to register its disgust at the decision by Mnangagwa to raise fuel prices by 150%.
A local rights group, the Zimbabwe Lawyers for Human Rights reported that police and army personnel carried out indiscriminate door-to-door raids, forcibly entering homes by breaking doors and windows.
Ramaphosa is leading the chorus by African leaders demanding the removal of sanctions imposed on Zimbabwe by the US and the European Union.